Fantaro i Ruben Hilari Quispe, mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas manomboka ny 28 Janoary ka hatramin’ny 3 Febroary 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2019 11:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Deutsch, Ελληνικά, Italiano, Español
Sary nomen'i Ruben Hilari Quispe
Amin'ity taona 2019 ity izahay manasa mpampiatrano isan-karazany hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihanteny) ary hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy ny fampiroboroboana ny tenin-drazan-dry zareo. Ity horirana ity miresaka momba an'i Ruben Hilari, sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiatrano azy.
Izaho no Ruben Hilari Quispe (Jilalu Qhisphi amin'ny teny Aymara) avy amin'ny firenena Aymara avy amin'ny Ry Andes, monina ao El Alto, Bolivia aho, tanàna vaovao sy mihalehibe izay Aymara no betsaka ao. Misy olona hafa miantso ahy ho Aymara mpikatroka an-tserasera. Mandray anjara amin'izay karazana hetsika rehetra ahafahana manamafy orina ny fiteny sy ny kolontsaina QULLAN AYMARA izahay.
RV: Manao ahoana ny fiteninareo ato amin'ny aterineto sy ivelan'ny serasera?
Mihamivelatra ny fiteny Aymara ato amin'ny tambajotran'ny tambajotra, na dia tsy mahazo fanohanana avy amin'ny governemanta aza. Mandray sy mampiasa itony fitaovana ity ny Aymara mpisera hampiasaina ny fiteninay. Mbola tsy mivadika araka ny tokony ho izy ny toe-draharaha, na dia efa misy aza ny governemanta tompotany. Azolazaina hoe misy mponina an-tapitrisany mampita ny kely dia kely indrindra amin'ny taranaka manaraka. Tokony hiara-miasa ny governemanta, ny mpiteny, ary ny akademia mba hifampaherezana, saingy mbola tsy mitranga izany.
RV: Lohahevitra manao ahoana no kasainao ifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter @ActLenguas ?
Mandritra ny herinandro isika hampiseho amin'ny mponina sy ny mpanjohy ny hetsika rehetra sy ny lahatahiry momba ny fiteny Aymara. Hamaly ny fanontanian'ny mpisera ihany koa izahay. Manana hetsika efa vita kinasa izahay hanamafisana ny fiteny sy ny kolontsainay mandritra ny taona 2019.
RV: Inona no hery mpanetsika lehibe indrindra anao mahatonga anao havitrika an-tserasera amin'ny fiteninao?
Mety ho lasa fiteny mamirapiratra ny fiteninay heverina fa an'ny vitsy an'isa rehefa omena vahana (fankaherezana) ny mpiteny azy ary ampiharin'ny mpiteny azy amin'ny toe-javatra rehetra iainany andavanandro ny fiteny.